ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ထွန်းအောင်ကျော် - သက္ကရာဇ် ၂၀၀၉ မြန်မာနိုင်ငံစစ်တမ်း
ထွန်းအောင်ကျော် - သက္ကရာဇ် ၂၀၀၉ မြန်မာနိုင်ငံစစ်တမ်း
2009 Analysis Final
အင်မတန်မှ လမ်းလွဲပြီး လက်တွေ့ မဆန်သောသုံးသပ်ချက်များဟုမြင်ပါသည်။
NCGUB ပြည်ပမှာ တစ်နှစ် ဒေါ်လာတစ်သန်းရှာနိုင်သည်ဆိုလျင် နှစ်ပေါင်း၂၀ နီးပါးအတွင်း ထိုသန်းပေါင်းများစွာကိုဘာလုပ်ပစ်ပါသနည်း။
မြန်မာပြည်ခုထိ ဒီမိုကရေစီမရသေးပါ။ ဒေါ်စု
ပြည်ပမှာနေပြီး၊ ဒေါ်စုကိုဗန်းပြ ပြီး ရန်ုပုံငွေ သန်းတစ်ရာထိ ပိုတောင်း ရနိုင် ရန် ကြံစည်ပြန်လေသည်။ ဒေါ်စု ထွက်မည်ဆိုပါက ပြည်ပမှာနေပြီး နိုင်ငံတကာလှည့် အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါအောက်ကျခံအကူအညီတောင်းခိုင်းနေပြန်ပါပြီ။ မေးမည်ဆိုပါက ဒေါ်စု ဘယ်သောအခါမှပြည်တော်ပြန်ဝင်နိုင်မည်နည်း။ ပြည်တွင်းမှာနေသဖြင့် နိုဘယ်ဆုရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်စု အရပ်တကာလှည့် အကူအညီလိုက်တောင်းနေပါက နောင်အနှစ် ၄၀ သာကြာသွားမည်။ သင်တို့ DEMOCRAZY သာ ရသွားပေမည်။ ဒေါ်စု တော့ ပြည်တော်ပြန်ဝင်နိုင်မည့်လမ်းမရှိတော့ပေ။ ဒေါ်စု ကို ပြည်တွင်းမှာ အကျယ်ချုပ်ချထားခံနေရခြင်းကိုက မြန်မာပြည်မလွတ်မြောက်သေးသောသင်္ကေတဖြစ်ပေသည်။
ကို ထွန်းအောင်ကျော်တို့ 
အထက်ပါမှတ်ချက်မှာ ဒေါ်စုနှင့်ပတ်သတ်သည့် အကြံပေးချက်များကို သာ ရည်ညွှန်းးပါသည်။ ကျန်သုံးသပ်ချက်အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ။
အများဆုံးရနေသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော်လည်း အရည်အချင်း မရှိသောသူများ ဦးဆောင် နေသဖြင့် ပျိုလလာခဲသည်မှာ နောက်ဆုံး ထိုင်းအခြေစိုက်ရုံး၊ ၀ါရှင်တန်အခြေစိုက်ရုံးမျာဲး့ ပိတပစ်ခဲ့ရသည်အထ်ိဆိုးဝါးလာခဲ့သည်၊ သို့ရာတွင် ၀န်ကြီးချုပ်ကတော့ အိမ်ဝယ်ဖြစ် သွားသည်။ "
Apt နေ ထွက်ပေးရဖို့ကြုံလာပါတယ်..
Maryland မှာရှိတဲ့ မြန်မာမိတ်ဆွေမိသားစုတွေ
ရဲ့ cousin ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ငွေများစွာ အိမ်ဝယ်
ဖို့ Deposit money ကူပေးပါတယ်..အဲဒါတောင်
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နာမည်နဲ့ loan ရပြီးဝယ်တာပါ..
အဲဒီလိုတလွဲ တွေ့တော့ ကျွန်တော်အတွက် အရသာ
အနေနဲ့ ၂၀ နှစ်ကြာပြီးတဲ့ အချိန်မှာ..ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောပါတယ်.
" နိုင်ငံပြင်ပမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်
ချင်သူတိုင်း ကိုယ်ခြေထောက်ပေါ်ကို ရပ်ပြီး တောင် ထမင်းမစာရှားနိုင်ဘူးဆိုရင်..Forget it! လို့"
ကိုထွန်းအောင်ကျော် ဝေဖန်တာ ကြည့်လိုက်ရင် ကောင်းမလိုလိုပါ၊ သို့ပေမဲ့ နယ်စပ်ဒေသကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ တိုင်းရင်သား အဖွဲ့အစည်းတွေကို သိပ်မဝေဖန်ရဲသလို ဖြစ်နေတယ်၊ ENC အပါအ၀င် လူငါးယောက်လောက် ရှိလာရင် ဗမာမုန်းတီးရေးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီ ဖင်ပြော ခေါင်းပြော ပြောတတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဝေဖန်
မှတ်ချက်ရေးတဲ့လူတွေကိုသတိထားမိတယ်...ရေးတာတောင်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ရေးတာ ဗမာမဟုတ်ပါဘူး...ဒါက ကြောက်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်။
၁) လူအများစု ကိုယ်ပိုင်နာမည်မသုံးဘူး။ နာမည်အတုတွေနဲ့...
၂) ပေါ်တင်ရေးတာ သူများထမင်းအိုးဒုတ်နဲ့ထိုးတာမဟုတ်ပါ။
၄) လက်နဲ့ပြောတာထက်စာရင် ပါးစပ်နဲ့ပြောတာ ဆုံးရှုံးမှုမရှိပါဘူး။ လက်နဲ့ထိုးကျကြိတ်ကြ တာကိုဆိုလိုတာပါ။ စာနဲ့ထိုးတာ ဆေးရုံမတက်ရဘူး...ငွေမကုန်ဘူး...။
၅) ရေးလည်းရေးချင်တယ်...ပြောလည်းပြောချင်တယ်...ငါပြောတာဆိုတာကိုလည်း တာဝန်မခံရဲဘူး...
၆) ဗမာတွေရဲ့ အကျင့်ကိုပြောတာပါ...ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူး...။ တွေးပြီးကြောက်တက်တယ်။
၇) ဦးထွန်းအောင်ကျော်သည် ဝေဖန်ရေးသမားဖြစ်သည်..။ လက်တွေ့နိုင်ငံရေးမလုပ်သူဖြစ်သည်။ မလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားတွင်ဖြစ်သည်။ သူ့ စာသည် ဝေဖန်သောစာဖြစ်သည်။ အချက်အလက်၊ အကိုးကားမရှိ၊ ပညာရှင်များရေးသော တွေ့ရှိချက် စာတမ်းမဟုတ်ပါ...။ အမြင် သက်သက်သာဖြစ်သည်...။ သူ့အမြင်ကို သူပြောတာဟာ မှန်ပါတယ်။ မှားတယ်မရှိပါ...။ သူခံယူချက်နဲ့သူသာဖြစ်သည်။ ဦးထွန်းအောင်ကျော်သည် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ တာဝန်ရှိသူမဟုတ်ပါ။
ဒေါက်တာစိန်ဝင်းသည်လက်ရှိတာဝန်အရှိဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အဝေဖန်ခံနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဝေဖန်မခံနိုင်လျှင် ၀န်ကြီးချုပ်မဟုတ်ပါ။ တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်သည် မိမိတာဝန်ကို မိမိ လုံးဝယူရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိမှားသည်၊ အရည်အချင်းမရှိ၊ မိမိတော်သည်၊ မိမိလုပ်ရပ်အောင်မြင်သည်...စတဲ့ မိမိလုပ်ရပ်အပေါ်တာဝန်ယူရဲရမည်...ဒီလိုလုပ်ချင်လို့ ဒီလိုဝန်ကြီးဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ၀န်ကြီးသည် ဒီလိုမဟုတ်၊ ပွင့်လင်းမှုမရှိ၊ သူပွင့်လင်းလျှင် ဒီလိုဖြစ်လာမည်မဟုတ်။
ဗမာတွေ ID ပွင့်လင်းရမည်။ မိမိအမြင်ပြောရဲရမည်။ ဆဲတက်ရမည်။
ဦးထွန်းအောင်ကျော် သူ့အမြင်သူပြောတာမှန်ပါသည်။ ဖြစ်တာမဖြစ်တာတော့ သူ့ကိစ္စမဟုတ်ပါ။
မင်းကိုမင်းပြန်စစ်တမ်းထုတ်ပါအုံးကွာ USမှာ ဆူရှီဆိုင်တွေဖွင့်ပြီး တရွှေလုံးတမျိုးလုံး ပြည်တော်သာနေပြီး သူများတွေကို ဝေဖန်မနေစမ်းပါနဲံ့ ABမင်းတို့ ကြောင့်ပျက်ခဲ့ရပြီ ၀ဲကြီးမှာab လက်ကျန်တွေနဲ့ ဓါတ်ပွဲတွဲရိုက်ပြီး နိုင်ငံလှည့်ပြီးတောင်းစားတဲ့ဇတ် လမ်း တွေမငြီးငွေသေးဘူးလား မင်းထင်သလို နိုင်ငံရေးဟာ အပိုဝင်ရနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူး သေခါနီးမပင်ပန်းဘဲရမယ့် ရမယ့် နိုင်ငံတကာလှည့်ပြီး ခွတ်ကိုင်တောင်းစားတဲ့ အလုပ်တွေ တော်လှန်ပျက် တတောင်းစားတွေလုပ်နေကြတာ တပုံကြီးဘဲ မင်းလုပ်ရဲ ရင် USကချီးထုတ်တွေပါခေါ်လာပြီး ပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးကွင်းထဲဆင်းမလား လမ်းစရိတ်လိုရင်ရှာပေးမယ်
ဘုန်းကျော် မင်းလည်း စစ်သားလူထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးအသံကောင်းလိုက်ဟစ်မနေစမ်းပါနဲ့မင်းစစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်ဖို့ မရဲဘဲနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လိုက်ဝေဖမ်မနေနဲ့စစ်ထွက်တွေအပြင်ရောက်လာရင် လိမ်ပြောင်းသွားတာများတယ် မင်းလည်း တော်လှန်ရေးကြောင့် နိုင်ငံခြားရောက်သွားပြီးမှ ကြီးကျယ်မနေစမ်းပါနဲ့အောင်မျိုးမင်းအဖွဲ့ ထဲဝင်ပါလားရာဇ၀င်မှာ စစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်နေတဲ့ စစ်ထွက်တကောင်မှမရှိဘူး မင်းလည်းလိမ်ပြောင်ပြီး လူမဲတရောက်လောက်ယူလိုက်ပေါ့နော့။
ဗမာတွေရဲ့ အကျင့်ကိုပြောတာပါ ..ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူး...။ တွေးပြီးကြောက်တက်တယ်။
ဆိုတော့ ကလောင်နာမည်သုံးထားတာကလွဲရင် ကျွန်တော်အထက်မှာပြောတာ ပြန်သုံးသပ်ပြတာ ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကို ဆဲတာတလုံးမှမပါပါ.မယဉ်ကျေးတာတစ်ခွန်းမပါပါ။ ဦးထွန်အောင်ကျော် နိုင်ငံရေးမလုပ်နိုင်လို့ ဝေဖန်ရေးသမားဆိုခဲ့ရင်သူ့ ဝေဖန်ချက်ကိုပြန်သုံးသပ်ခြင်းကို ဘာကြောင့် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေရပါသနည်း။
ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရတစ်ရပ်သည် မိမိအမြင်အား လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားတင်ပြခွင့်ပါဝင်ပါသည်။ အမည်နာမအရင်းသုံးမသုံးဟူသည်သူတစ်ပါးအားတရားလက်လွတ်ဆဲဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ ရေးသားသူ၏ လူ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။
ွကျွန်တော့်သုံးသပ်ပြချက်မှာ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ပြည်ပမှာနေပြီး နိုင်ငံရေးတော်လှနါရေးအမည်ခံသမားတို့မျောက်ပြဆန်တောင်းအဖြစ်ထဲဒေါ်စုအားအပါမခံနိုင်သောကြောင့် မြင်သည့်အတိုင်းပြန်သုံးသပ်မိခြင်းသက်သက်ဖြစ်ပါသည်။ ထပ်ဆောင်းပြောရရင် ဘီဘီစီ၊ VOAတို့ ကနေ ဒေါ်စုတရားဟောခြင်းဖြင့် ပြည်သုနှင့် ပိုနီးကပ်သွားမည်ဆိုပါက မည်မျှကြာအောင်ဒေါ်စု အောင်နိုင်ပါမည်နည်း။ ပြည်သူ့ အမြင်မှာသူ့ ကျတော့ ပြည်ပမှာနေပြီး ငါတို့ ပဲလာမြှောက်ပေးနေတယ်ပဲမြင်ပါမည်။ ဒေါ်စု နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေစေကာမူဒေါ်စုနှင့်ပြည်သူဘယ်တော့မှဝေးကွာသွားခဲ့သည်ဟုမမြင်ပါ။
ခင်ဗျားပြောသလို ...ဗမာတွေ ID ပွင့်လင်းရမည်။ မိမိအမြင်ပြောရဲရမည်။ ဆဲတက်ရမည်..
ခင်ဗျားရဲ့ google Gmail I.D ကနာမည်လဲမပါ။ ဘာ ID မှ မပါသော သနားစရာ အမည်မဲ့ အတုံးအတုံး "-----" များနှင့်သာာကြောင့်အကောင့်ဖွင့်ထားရပါသလဲ ..ဒါလဲခင်ဗျားလွတ်လပ်ခွင့်ပေမည့် သူများအမည်များအားထောက်ပြထားသူဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆန်းစစ်နိုင်အောင်ပြန် ထောက်ပြခြင်းပါ.
ဘုန်းကျော် (လူ့ ဘောင်ချစ်) ဆိုတာ လူ့ ဘောင်သစ်နဲ့ ဘာတော်သလဲ မပြောတတ်ဘူး။သေချာတာကတော့ လူ့ ဘောင်သစ်နာမည်ကိုခိုးချထားတာပဲ။ခင်ဗျားမှာကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်မှုမရှိတာထင်ရှားပေသည်။ နာမည် ဘာပဲပေးပေး ဒါလဲခင်ဗျားလွတ်လပ်ခွင့်တစ်ရပ်မို့ ကျွန်တော်တို့ ဆဲတတ်ပေမယ့်မဆဲလိုပါ။
To " -----"
"မှတ်ချက်ရေးတဲ့လူတွေကိုသတိထားမိတယ်...ရေးတာတောင်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ရေးတာ ဗမာမဟုတ်ပါဘူး...ဒါက ကြောက်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ "
ဆိုတော့ နာမည်မပေးရဲ ဘဲ Gmail ID ဖွင့်ထားတဲ့မှတ်ချက်ပေးသူ ၏ ကြောက်စိတ်မှာ အားလုံးထက်သာလွန်ပေသည် ဆိုခဲ့လျင်...
My Archive 09/16 - 09/23 (29) 09/23 - 09/30 (59) 09/30 - 10/07 (36) 10/07 - 10/14 (38) 10/14 - 10/21 (38) 10/21 - 10/28 (26) 10/28 - 11/04 (47) 11/04 - 11/11 (29) 11/11 - 11/18 (30) 11/18 - 11/25 (28) 11/25 - 12/02 (21) 12/02 - 12/09 (13) 12/09 - 12/16 (20) 12/16 - 12/23 (24) 12/23 - 12/30 (22) 12/30 - 01/06 (26) 01/06 - 01/13 (26) 01/13 - 01/20 (19) 01/20 - 01/27 (19) 01/27 - 02/03 (15) 02/03 - 02/10 (16) 02/10 - 02/17 (12) 02/17 - 02/24 (17) 02/24 - 03/02 (13) 03/02 - 03/09 (13) 03/09 - 03/16 (17) 03/16 - 03/23 (18) 03/23 - 03/30 (8) 03/30 - 04/06 (11) 04/06 - 04/13 (9) 04/13 - 04/20 (6) 04/20 - 04/27 (9) 04/27 - 05/04 (10) 05/04 - 05/11 (12) 05/11 - 05/18 (7) 05/18 - 05/25 (10) 05/25 - 06/01 (8) 06/01 - 06/08 (17) 06/08 - 06/15 (11) 06/15 - 06/22 (17) 06/22 - 06/29 (6) 06/29 - 07/06 (9) 07/06 - 07/13 (17) 07/13 - 07/20 (13) 07/20 - 07/27 (16) 07/27 - 08/03 (16) 08/03 - 08/10 (11) 08/10 - 08/17 (15) 08/17 - 08/24 (12) 08/24 - 08/31 (8) 08/31 - 09/07 (13) 09/07 - 09/14 (8) 09/14 - 09/21 (9) 09/21 - 09/28 (6) 09/28 - 10/05 (10) 10/05 - 10/12 (12) 10/12 - 10/19 (14) 10/19 - 10/26 (14) 10/26 - 11/02 (12) 11/02 - 11/09 (14) 11/09 - 11/16 (16) 11/16 - 11/23 (14) 11/23 - 11/30 (11) 11/30 - 12/07 (15) 12/07 - 12/14 (13) 12/14 - 12/21 (13) 12/21 - 12/28 (17) 12/28 - 01/04 (16) 01/04 - 01/11 (21) 01/11 - 01/18 (21) 01/18 - 01/25 (20) 01/25 - 02/01 (18) 02/01 - 02/08 (17) 02/08 - 02/15 (25) 02/15 - 02/22 (19) 02/22 - 03/01 (17) 03/01 - 03/08 (24) 03/08 - 03/15 (15) 03/15 - 03/22 (15) 03/22 - 03/29 (22) 03/29 - 04/05 (21) 04/05 - 04/12 (18) 04/12 - 04/19 (14) 04/19 - 04/26 (16) 04/26 - 05/03 (17) 05/03 - 05/10 (12) 05/10 - 05/17 (17) 05/17 - 05/24 (20) 05/24 - 05/31 (24) 05/31 - 06/07 (21) 06/07 - 06/14 (18) 06/14 - 06/21 (17) 06/21 - 06/28 (15) 06/28 - 07/05 (16) 07/05 - 07/12 (16) 07/12 - 07/19 (19) 07/19 - 07/26 (19) 07/26 - 08/02 (20) 08/02 - 08/09 (22) 08/09 - 08/16 (15) 08/16 - 08/23 (19) 08/23 - 08/30 (14) 08/30 - 09/06 (15) 09/06 - 09/13 (13) 09/13 - 09/20 (15) 09/20 - 09/27 (14) 09/27 - 10/04 (15) 10/04 - 10/11 (13) 10/11 - 10/18 (15) 10/18 - 10/25 (13) 10/25 - 11/01 (14) 11/01 - 11/08 (17) 11/08 - 11/15 (16) 11/15 - 11/22 (12) 11/22 - 11/29 (16) 11/29 - 12/06 (14) 12/06 - 12/13 (14) 12/13 - 12/20 (18) 12/20 - 12/27 (15) 12/27 - 01/03 (12) 01/03 - 01/10 (12) 01/10 - 01/17 (14) 01/17 - 01/24 (11) 01/24 - 01/31 (16) 01/31 - 02/07 (13) 02/07 - 02/14 (14) 02/14 - 02/21 (17) 02/21 - 02/28 (8) 02/28 - 03/07 (12) 03/07 - 03/14 (19) 03/14 - 03/21 (15) 03/21 - 03/28 (17) 03/28 - 04/04 (16) 04/04 - 04/11 (14) 04/11 - 04/18 (17) 04/18 - 04/25 (17) 04/25 - 05/02 (18) 05/02 - 05/09 (15) 05/09 - 05/16 (18) 05/16 - 05/23 (12) 05/23 - 05/30 (13) 05/30 - 06/06 (11) 06/06 - 06/13 (14) 06/13 - 06/20 (13) 06/20 - 06/27 (17) 06/27 - 07/04 (14) 07/04 - 07/11 (21) 07/11 - 07/18 (16) 07/18 - 07/25 (22) 07/25 - 08/01 (15) 08/01 - 08/08 (15) 08/08 - 08/15 (21) 08/15 - 08/22 (15) 08/22 - 08/29 (16) 08/29 - 09/05 (19) 09/05 - 09/12 (15) 09/12 - 09/19 (18) 09/19 - 09/26 (16) 09/26 - 10/03 (19) 10/03 - 10/10 (13) 10/10 - 10/17 (15) 10/17 - 10/24 (15) 10/24 - 10/31 (16) 10/31 - 11/07 (19) 11/07 - 11/14 (13) 11/14 - 11/21 (20) 11/21 - 11/28 (17) 11/28 - 12/05 (24) 12/05 - 12/12 (16) 12/12 - 12/19 (22) 12/19 - 12/26 (16) 12/26 - 01/02 (19) 01/02 - 01/09 (22) 01/09 - 01/16 (20) 01/16 - 01/23 (25) 01/23 - 01/30 (23) 01/30 - 02/06 (14) 02/06 - 02/13 (21) 02/13 - 02/20 (23) 02/20 - 02/27 (20) 02/27 - 03/06 (19) 03/06 - 03/13 (20) 03/13 - 03/20 (20) 03/20 - 03/27 (21) 03/27 - 04/03 (25) 04/03 - 04/10 (21) 04/10 - 04/17 (16) 04/17 - 04/24 (22) 04/24 - 05/01 (16) 05/01 - 05/08 (20) 05/08 - 05/15 (19) 05/15 - 05/22 (26) 05/22 - 05/29 (21) 05/29 - 06/05 (20) 06/05 - 06/12 (22) 06/12 - 06/19 (23) 06/19 - 06/26 (17) 06/26 - 07/03 (20) 07/03 - 07/10 (24) 07/10 - 07/17 (20) 07/17 - 07/24 (22) 07/24 - 07/31 (17) 07/31 - 08/07 (26) 08/07 - 08/14 (29) 08/14 - 08/21 (17) 08/21 - 08/28 (26) 08/28 - 09/04 (20) 09/04 - 09/11 (23) 09/11 - 09/18 (25) 09/18 - 09/25 (20) 09/25 - 10/02 (27) 10/02 - 10/09 (30) 10/09 - 10/16 (46) 10/16 - 10/23 (41) 10/23 - 10/30 (30) 10/30 - 11/06 (36) 11/06 - 11/13 (27) 11/13 - 11/20 (32) 11/20 - 11/27 (18) 11/27 - 12/04 (32) 12/04 - 12/11 (19) 12/11 - 12/18 (19) 12/18 - 12/25 (25) 12/25 - 01/01 (33) 01/01 - 01/08 (42) 01/08 - 01/15 (47) 01/15 - 01/22 (48) 01/22 - 01/29 (42) 01/29 - 02/05 (36) 02/05 - 02/12 (48) 02/12 - 02/19 (43) 02/19 - 02/26 (46) 02/26 - 03/04 (41) 03/04 - 03/11 (41) 03/11 - 03/18 (37) 03/18 - 03/25 (33) 03/25 - 04/01 (31) 04/01 - 04/08 (32) 04/08 - 04/15 (31) 04/15 - 04/22 (33) 04/22 - 04/29 (31) 04/29 - 05/06 (35) 05/06 - 05/13 (39) 05/13 - 05/20 (31) 05/20 - 05/27 (39) 05/27 - 06/03 (34) 06/03 - 06/10 (39) 06/10 - 06/17 (41) 06/17 - 06/24 (40) 06/24 - 07/01 (31) 07/01 - 07/08 (40) 07/08 - 07/15 (35) 07/15 - 07/22 (37) 07/22 - 07/29 (39) 07/29 - 08/05 (30) 08/05 - 08/12 (34) 08/12 - 08/19 (31) 08/19 - 08/26 (34) 08/26 - 09/02 (34) 09/02 - 09/09 (32) 09/09 - 09/16 (37) 09/16 - 09/23 (41) 09/23 - 09/30 (37) 09/30 - 10/07 (32) 10/07 - 10/14 (36) 10/14 - 10/21 (35) 10/21 - 10/28 (26) 10/28 - 11/04 (31) 11/04 - 11/11 (33) 11/11 - 11/18 (32) 11/18 - 11/25 (32) 11/25 - 12/02 (34) 12/02 - 12/09 (34) 12/09 - 12/16 (30) 12/16 - 12/23 (32) 12/23 - 12/30 (36) 12/30 - 01/06 (33) 01/06 - 01/13 (1) 01/13 - 01/20 (12) 01/20 - 01/27 (24) 01/27 - 02/03 (21) 02/03 - 02/10 (22) 02/10 - 02/17 (33) 02/17 - 02/24 (33) 02/24 - 03/03 (31) 03/03 - 03/10 (30) 03/10 - 03/17 (34) 03/17 - 03/24 (35) 03/24 - 03/31 (37) 03/31 - 04/07 (34) 04/07 - 04/14 (27) 04/14 - 04/21 (23) 04/21 - 04/28 (31) 04/28 - 05/05 (28) 05/05 - 05/12 (31) 05/12 - 05/19 (30) 05/19 - 05/26 (28) 05/26 - 06/02 (34) 06/02 - 06/09 (33) 06/09 - 06/16 (30) 06/16 - 06/23 (31) 06/23 - 06/30 (31) 06/30 - 07/07 (35) 07/07 - 07/14 (32) 07/14 - 07/21 (38) 07/21 - 07/28 (30) 07/28 - 08/04 (26) 08/04 - 08/11 (35) 08/11 - 08/18 (29) 08/18 - 08/25 (12) 08/25 - 09/01 (14) 09/01 - 09/08 (9) 09/08 - 09/15 (16) 09/15 - 09/22 (22) 09/22 - 09/29 (12) 09/29 - 10/06 (3) 10/06 - 10/13 (15) 10/13 - 10/20 (13) 10/20 - 10/27 (16) 10/27 - 11/03 (13) 11/03 - 11/10 (19) 11/10 - 11/17 (14) 11/17 - 11/24 (17) 11/24 - 12/01 (20) 12/01 - 12/08 (12) 12/08 - 12/15 (11) 12/15 - 12/22 (11) 12/22 - 12/29 (9) 12/29 - 01/05 (14) 01/05 - 01/12 (14) 01/12 - 01/19 (10) 01/19 - 01/26 (14) 01/26 - 02/02 (11) 02/02 - 02/09 (9) 02/09 - 02/16 (7) 02/16 - 02/23 (14) 02/23 - 03/02 (9) 03/02 - 03/09 (9) 03/09 - 03/16 (8) 03/16 - 03/23 (9) 03/23 - 03/30 (12) 03/30 - 04/06 (8) 04/06 - 04/13 (4) 04/13 - 04/20 (2) 04/20 - 04/27 (19) 04/27 - 05/04 (7) 05/04 - 05/11 (6) 05/11 - 05/18 (27) 05/18 - 05/25 (23) 05/25 - 06/01 (40) 06/01 - 06/08 (31) 06/08 - 06/15 (41) 06/15 - 06/22 (43) 06/22 - 06/29 (82) 06/29 - 07/06 (75) 07/06 - 07/13 (69) 07/13 - 07/20 (44) 07/20 - 07/27 (37) 07/27 - 08/03 (12) 08/03 - 08/10 (18) 08/10 - 08/17 (14) 08/17 - 08/24 (21) 08/24 - 08/31 (26) 08/31 - 09/07 (5) 09/07 - 09/14 (24) 09/14 - 09/21 (20) 09/21 - 09/28 (24) 09/28 - 10/05 (21) 10/05 - 10/12 (22) 10/12 - 10/19 (24) 10/19 - 10/26 (15) 11/02 - 11/09 (16) 11/09 - 11/16 (26) 11/16 - 11/23 (34) 11/23 - 11/30 (20) 11/30 - 12/07 (22) 12/07 - 12/14 (18) 12/14 - 12/21 (21) 12/21 - 12/28 (17) 12/28 - 01/04 (18) 01/04 - 01/11 (18) 01/11 - 01/18 (16) 01/18 - 01/25 (12) 01/25 - 02/01 (16) 02/01 - 02/08 (11) 02/08 - 02/15 (5) 02/15 - 02/22 (8) 02/22 - 03/01 (11) 03/01 - 03/08 (13) 03/08 - 03/15 (24) 03/15 - 03/22 (21) 03/22 - 03/29 (13) 03/29 - 04/05 (8) 04/05 - 04/12 (11) 04/19 - 04/26 (2) 04/26 - 05/03 (2) 05/10 - 05/17 (1) 05/24 - 05/31 (5) 06/07 - 06/14 (1) 06/21 - 06/28 (2) 06/28 - 07/05 (1) 07/19 - 07/26 (5) 07/26 - 08/02 (1) 08/02 - 08/09 (2) 08/23 - 08/30 (1) 08/30 - 09/06 (1) 09/06 - 09/13 (1) 09/13 - 09/20 (1) 09/20 - 09/27 (1) 10/04 - 10/11 (1) 10/11 - 10/18 (3) 10/18 - 10/25 (2) 10/25 - 11/01 (3) 11/01 - 11/08 (1) 11/08 - 11/15 (3) 11/22 - 11/29 (2) 12/06 - 12/13 (4) 12/20 - 12/27 (3) 12/27 - 01/03 (1) 01/17 - 01/24 (2) 01/24 - 01/31 (3) 01/31 - 02/07 (1) 02/14 - 02/21 (2) 02/21 - 02/28 (2) 02/28 - 03/06 (1) 03/06 - 03/13 (1) 03/13 - 03/20 (2) 03/20 - 03/27 (3) 03/27 - 04/03 (3) 04/03 - 04/10 (2) 04/17 - 04/24 (2) 04/24 - 05/01 (1) 05/01 - 05/08 (3) 05/08 - 05/15 (2) 05/15 - 05/22 (3) 05/22 - 05/29 (1) 05/29 - 06/05 (3) 06/05 - 06/12 (4) 06/12 - 06/19 (2) 06/19 - 06/26 (7) 06/26 - 07/03 (5) 07/03 - 07/10 (2) 07/17 - 07/24 (3) 07/24 - 07/31 (3) 07/31 - 08/07 (5) 08/07 - 08/14 (2) 08/14 - 08/21 (3) 08/21 - 08/28 (5) 08/28 - 09/04 (6) 09/04 - 09/11 (4) 09/11 - 09/18 (1) 09/18 - 09/25 (3) 09/25 - 10/02 (4) 10/02 - 10/09 (1) 10/09 - 10/16 (2) 10/16 - 10/23 (2) 10/23 - 10/30 (4) 10/30 - 11/06 (5) 11/06 - 11/13 (5) 11/13 - 11/20 (5) 11/20 - 11/27 (2) 11/27 - 12/04 (1) 12/04 - 12/11 (6) 12/11 - 12/18 (4) 12/18 - 12/25 (1) 12/25 - 01/01 (2) 01/08 - 01/15 (1) 01/15 - 01/22 (1) 01/22 - 01/29 (1) 01/29 - 02/05 (9) 02/05 - 02/12 (1) 02/12 - 02/19 (1) 02/26 - 03/05 (3) 03/05 - 03/12 (7) 03/12 - 03/19 (2) 03/19 - 03/26 (1) 03/26 - 04/02 (1) 04/02 - 04/09 (1) 04/09 - 04/16 (1) 04/16 - 04/23 (1) 04/23 - 04/30 (4) 04/30 - 05/07 (5) 05/07 - 05/14 (4) 05/14 - 05/21 (6) 05/21 - 05/28 (9) 05/28 - 06/04 (3) 06/04 - 06/11 (3) 06/11 - 06/18 (4) 06/18 - 06/25 (3) 06/25 - 07/02 (4) 07/09 - 07/16 (2) 07/16 - 07/23 (6) 07/23 - 07/30 (7) 07/30 - 08/06 (3) 08/06 - 08/13 (6) 08/13 - 08/20 (3) 08/20 - 08/27 (1) 08/27 - 09/03 (1) 09/03 - 09/10 (2) 09/10 - 09/17 (1) 09/17 - 09/24 (6) 09/24 - 10/01 (2) 10/01 - 10/08 (1) 10/08 - 10/15 (5) 10/15 - 10/22 (1) 10/22 - 10/29 (3) 10/29 - 11/05 (2) 11/05 - 11/12 (7) 11/19 - 11/26 (3) 11/26 - 12/03 (2) 12/03 - 12/10 (1) 12/10 - 12/17 (2) 12/17 - 12/24 (1) 12/24 - 12/31 (1) 12/31 - 01/07 (3) 01/07 - 01/14 (2) 01/14 - 01/21 (1) 01/21 - 01/28 (1) 01/28 - 02/04 (5) 02/04 - 02/11 (3) 02/11 - 02/18 (2) 02/18 - 02/25 (3) 02/25 - 03/04 (2) 03/11 - 03/18 (1) 03/18 - 03/25 (4) 03/25 - 04/01 (3) 04/08 - 04/15 (2) 04/15 - 04/22 (5) 04/22 - 04/29 (3) 05/06 - 05/13 (3) 05/13 - 05/20 (3) 05/20 - 05/27 (2) 05/27 - 06/03 (3) 06/10 - 06/17 (5) 07/01 - 07/08 (1) 07/08 - 07/15 (1) 07/15 - 07/22 (2) 07/22 - 07/29 (2) 07/29 - 08/05 (2) 08/05 - 08/12 (1) 08/19 - 08/26 (1) 08/26 - 09/02 (5) 09/09 - 09/16 (4) 09/23 - 09/30 (1) 10/07 - 10/14 (1) 10/21 - 10/28 (1) 12/02 - 12/09 (1) 01/13 - 01/20 (1) 02/10 - 02/17 (1) 03/10 - 03/17 (1) 04/07 - 04/14 (5) 04/14 - 04/21 (7) 06/23 - 06/30 (1) 07/28 - 08/04 (1) 10/06 - 10/13 (8) 12/29 - 01/05 (2) 02/02 - 02/09 (3) 02/09 - 02/16 (3) 02/16 - 02/23 (3) 03/22 - 03/29 (2) 03/29 - 04/05 (3) 04/05 - 04/12 (1) 04/19 - 04/26 (1) 04/26 - 05/03 (1) 05/03 - 05/10 (1) 05/10 - 05/17 (2)